ကျွန်တော့်မိန်းမဖူးဝေ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – မောင်လမ်းသရဲ
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ မေ့မရနိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီး တစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့ကို အစအဆုံး ပြောပြမယ်ဗျာ။ ပြောသမျှအားလုံး အမှန်တွေချည်းပဲ ပြောမှာ ဖြစ်ပေမယ့် တချို့အချက်အလက်တွေကိုတော့ ကျွန်တော့်လုံခြုံမှုအတွက် ထိန်ချန်ထားပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော့်မှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့ ဇနီးလေး တစ်ယောက် ရှိတယ်။ ချောလဲချောတယ်။ အေးအေးလေး နေတတ်သူ တစ်ယောက်ပေါ့။ နာမည်က ဖူးဝေ တဲ့။
ကျွန်တော်တို့က ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီးမှ ယူခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပဲ မိဘပေးစားလို့ ရခဲ့ကြတာပါ။ သူ့လို ဖြူဖြူချောချော ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ကြိုက်တဲ့လူတွေ တပြုံကြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကွင်းတွေဖြစ်တာမျိုး ရည်းစားများတာမျိုးတွေ မရှိဘူး။
ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်တော့ သူ့အသက်က ၂၄၊ ကျွန်တော်က၂၈ ။ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို အားကျလိုက်တာများ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ အရက်အတူတူသောက်ကြရင် “ဟျောင်ညီနိုင်၊ မင်းကတော့ တကယ့် စောက်ကံကောင်း ကောင်ပဲ”ဆိုပြီး အမြဲပြောတာ။ ဒါပေမယ့် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေ လိုးလို့ကောင်းလားတို့၊ ဖင်မချဘူးလားတို့တော့ မမေးရဲကြဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ခါ ကျွန်တော် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ၁ ပတ်လောက်မှာ အရက်သောက်ကြတော့ ကျွန်တော်နဲ့ သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ ကောင်တစ်ကောင် ပါလာတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ သိပြီးပါလာလဲတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမကို သိနေတယ်။ သူကပြောတာ ”မင်းမိန်းမ ဖြူဖြူတောင့် တောင့်နဲ့ ချောလဲချောဆိုတော့ ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး ဖင်လိုးလိုက်ရရင် ဆိမ့်သွားမှာပဲ” လို့ လာပြောရော။
ကျွန်တော်လည်း ဘာပြောကောင်းမလဲ စားပွဲအလယ်က အရက်ပုလင်းနဲ့ ဒီကောင့်မျက်နှာကို ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်တာ ၅ ချက်လောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ ပုလင်းတော့ မကွဲဘူး။ ဘေးကညသူငယ်ချင်းတွေ ဝိုင်းဆွဲကြတယ်။ သွေးတွေကို အများကြီးပဲ။ နောက်မှသိရတာ ဒီကောင်လဲ ကွဲပြဲကုန်လို့ ချုပ်လိုက်ရတယ်တဲ့။ ဘာပြသနာမှတော့ ထပ်မဖြစ်သွားပါဘူး။
အဲဒီကစလို့ ကျွန်တော့် မိန်းမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ သိပ်မစရဲကြတော့ဘူး။ တကယ်က ကျွန်တော်ကလည်း ရင်းနှီးနေတဲ့ လူချင်းဆို အဲ့လိုအလွန်အကျွံ စရင်တောင် ဘာမှလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကောင်က မသိပဲနဲ့ လာရိုင်းတာကိုး။ ကဲပါ အဲဒါတွေက အဖြစ်အပျက် သေးသေးလေးတွေပါ။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်အကြီးဆီကို ဆက်ပြောပြမယ်။
ကျွန်တော့်ယောက္ခမကြီးက တော်တော်တင်းကျပ်တဲ့ လူ။ သူ့သမီးကို Valintine Day မှာ ပန်းစည်းတွေ လာပို့တဲ့ ဆားဗစ်က လူတွေကိုဆို တံခါးကို မဖွင့်ပေးတာတဲ့။ ပြီးတော့ သူ့သမီးရဲ့ လက်ကိုင်အိတ် ကို တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိ စစ်တုန်းတဲ့။ ကျောင်းပို့ ကျောင်းကြိုကိုတောင် သူ့သမီးကို ကားမမောင်းခိုင်းပဲ သူကိုယ်တိုင် မအားတဲ့ကြားက လိုက်ပို့တာ။
အဲ့လို အုန့်ပုန်းမလေး ဖြူဖြူချောချောလေးကို ကျွန်တော့်လို တစ်ခါတစ်လေ အရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ လူနဲ့ ဘာကြောင့် သဘောတူလဲဆိုတာ စစချင်းတော့ စဉ်းစားမရဘူး။ နောက်မှသိရတာက ကျွန်တော့်အဖေက သူ့သမီးကို သွားတောင်းတာတောင် ထုံးစံမို့လို့ သွားတောင်းရတာ။ တကယ်က အဖေတို့က တကယ့်သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေတဲ့။
ကျွန်တော်တောင် စစချင်း စိတ်ပူလိုက်သေးတယ်။ ဒီလောက်ချောတဲ့ ကောင်မလေးက ရည်းစားတွေ ဘာတွေ ရှိမှာပဲပေါ့။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့ ရုတ်တရက်ကြီး ပေးစားတာလဲ။ တခြား သူတို့ သဘောမတူနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့များ ဖြစ်နေလို့လားပေါ့။ ဒါပေမယ့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးက တကယ့်ကို ရှားမှရှားတဲ့ အမျိုးအစားလေး ဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ မှတ်မိသေးတယ်။ မင်္ဂလာဦးညမှာ ကျွန်တော်က
”ဖူးဝေရေ… ရည်းစားပူတွေ ဘာတွေတော့ မမိနေပါဘူးနော်”
လို့ စသလိုလိုနဲ့ မေးလိုက်တော့ သူ့ပုံက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့
”သြော် မရှိပါဘူး အစ်ကို..”
ဆိုပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ပြန်ဖြေတယ်။ နောက်ရက်များ မကြာခင်မှာတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပုံက ”အစ်ကို” ကနေ ”ကို” ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော် ထင်ထားတာက ကျွန်တော့်မိန်းမကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်တွေ ပြောပြီး လိုးပစ်လိုက်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကတည်းက ကျွန်တော်က သူ့သိက္ခာကို ရှိန်နေတာ။ ညစ်ပတ်တာ တစ်ခွန်းမှကို ပြောမထွက်ဘူး။
သူက ကျွန်တော့်ကို ရိုသေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို သူကြည့်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ရိုသေမှုတွေကော အားကိုးမှုတွေပါ ရှိနေလို့ ကျွန်တော် အဲ့အခြေအနေတွေကို ဖျက်ဆီးမပစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူ့ကို ကာမဆက်ဆံတာလည်း မင်္ဂလာဦးညကတည်းက ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မဟုတ်ပဲ ပုံမှန်လောက်ပဲ လုပ်ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေလဲ ပြောမထွက်ဘူး။
ကျွန်တော် အားမရလွန်းလာရင် သူ့ဆံပင် ညိုညိုနုနုလေးတွေကို ထိုးဖွပေးပြီး လိုးတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမက မျက်ဝန်းညိုလဲ့လဲ့တွေနဲ့ ချောသလို သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကလဲ ကျွန်တော် စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတဲ့ အတိုင်းပဲ။ သူက ကျွန်တော်လုပ်တိုင်း ခံပေးပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာသာ သူ့ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ”ငါ့ကိုများ တဏှာကောင်ကြီးလို့ ထင်သွားမလား” ဆိုပြီး မသိစိတ်က အမြဲစိုးရိမ်နေခဲ့တာပါ။ သူ့ကို ကျွန်တော် ချစ်မိနေသလို သံယောဇဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အိမ်မှာ ပထမဆုံး အရက်သောက်တုန်းက
”ဖူးဝေရေ… ကို အရက်သောက်လို့ရလား… အိမ်မှာပဲ သောက်မယ်လေ”
ဆိုတော့ သူက သာမန်မေးခွန်းတစ်ခုကို ကြားလိုက်သလို ပုံမျိုးလေးနဲ့ပဲ
”ကို သောက်ချင်သောက်လေ… အများကြီးတော့ မသောက်နဲ့ပေါ့”
လို့ ပြန်ပြောတယ်။ (တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စည်းကမ်းနဲ့ နေလာတဲ့ မိန်းကလေးက ကျွန်တော် အရက်သောက်တာ ဘာမှမဖြစ်လို့ အံ့သြတာပါ)။
ကျွန်တော့်မှာ ပျော်လိုက်တာ။ သူ့မျက်နှာများ မကြိုက်တဲ့ပုံမျိုး ဖြစ်သွားမလား ထင်နေတာ။ ပြောပြီးမှ မှားပြီထင်နေတာ။ အဲ့ဒါလေးတွေက သူနဲ့ ကျွန်တော့်ကြားမှာ ချောမွေ့တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ် ဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့။
ကျွန်တော့်မိန်းမများ မြန်မာဝတ်စုံ ရင်ဖုံးနဲ့ထဘီ၊ စကပ်ကို ပါးပါးကြပ်ကြပ်လေးတွေ ဝတ်တဲ့နေ့တွေဆို ယောက်ျားတွေ ကြည့်လိုက်ကြတာမှ တရုံးရုံးပဲ။ ကျွန်တော့် မိန်းမလေးက ခန္ဓာကိုယ်သွယ်သွယ် ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ အရပ်ကလည်း ကျွန်တော့်မေးစေ့လောက် ရှိတာကိုး။ တခါတလေ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စားသောက်ဆိုင်သွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတွေက အားကျတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်ကြတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ၂ လကျော်ကျော်လောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှာ ကြမ္မာဆိုးက ဝင်လာတော့တာပဲ။ အဲဒီနေ့မနက်က ပုံမှန် သာသာယာယာပါပဲ။ ကျွန်တော့် ကားဘော်ဒီရုံကိုသွားတော့ ဖူးဝေက ကျွန်တော့်ကို မသွားခင် နမ်းလိုက်သေး တယ်။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာလည်း ကြည်နူးမဆုံး ဖြစ်နေတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ နေ့ခင်း ၁ နာရီလောက်မှာ ဘော်ဒီရုံကို မန်နေဂျာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အပ်ထားခဲ့ပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ စတော့တာပဲ။ ကျွန်တော့်ကားကို ခြံထဲမောင်းဝင်ဖို့ အိမ်ရှေ့ဝင်ပေါက် တည့်တည့်ကြီးမှာ ရေသန့်သုံးဘီးက လာရပ်ထားတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ မောင်းဝင်လိုက်ရတယ်။ စိတ်ထဲ တစ်ချက်တော့ တင်းသွားတာပေါ့။ ကားကို ဂိုထောင်ထဲထည့်ပြီး အိမ်ထဲဝင်လာတော့ အိမ်ရှေ့ဆင်ဝင်မှာ ကြက်ပေါင်ဖိနပ် အစုတ်တစ်ရံ တွေ့တော့ ရေသန့်ပို့နေကျလူ ရောက်နေတာ သိလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ရေသန့်က အောက်ထပ်မှာ ထားရမှာလေ။ တံခါးကြီးကလဲ ပွင့်နေ၊ ရေသန့်ပို့တဲ့လူက အောက်မှာမရှိ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ထိတ်ကနဲ တစ်ချက် ဖြစ်သွားတယ်။ အပေါ်ထပ်ကို တက်လာလိုက်တော့ အခန်းထဲမှာ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ”ကယ်ကြပါဦး…” ဆိုတဲ့ အသံကို တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပဲ ကြားလိုက်ရပြီး ”ဖြန်း” ကနဲ ”ဖြန်း” ကနဲ ရိုက်နေတဲ့ အသံတွေ ကြားရတယ်။ အခန်းတံခါးက ပိတ်မထားပဲ ပွင့်နေတယ်လေ။
အခန်းထဲက မီးက ဖွင့်ထားပြီး အခန်းပြင်က မီးမဖွင့်ထားတော့ နေ့ခင်းဆိုပေမယ့် နည်းနည်းမှောင်နေတယ်။ အခန်းရဲ့ ဟိုဖက်ကလည်းလရေချိုးခန်းဆိုတော့ နည်းနည်းကျယ်တဲ့ အိမ်ထဲကနေ အပြင်ကို အသံမထွက်နိုင်ပါဘူး။ အခန်းထဲကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့… လား…. လား… ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ရေသန့်ပို့တဲ့ အရပ်ရှည်ရှည် အသားမည်းမည်းနဲ့ အညာသားက ကျွန်တော့်မိန်းမလေးကို ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ပိတ်ထားပြီး ဟိုကိုင်ဒီကိုင် လုပ်နေတာ။ ဘာအဝတ်မှတော့ မချွတ်ရသေးဘူး။ ဖူးဝေလေးက သူ့အမေအိမ်ကနေ ပြန်လာတာ ထင်ပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင်နုနုမှာ ပန်းပွင့်ကြီးတွေပါတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီ ခါးတိုလေးနဲ့ ထဘီစကပ် ကြပ်ကြပ်လေးကို ဝတ်ထားတယ်။ ဟိုရေသန့်ပို့တဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမလေးကို အတင်းဖမ်းချုပ် ဖျစ်ညှစ်ပြီး လိုက်နမ်းနေတယ်။
ဟာ… ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ် မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ခါးသီးလွန်းလှပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ကို ဘာမှမလုပ်နိုင်အောင် ဖမ်းစားထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် မိန်းမလေးက ရုန်းကန်နေတော့ ခါးသားဝင်းဝင်းလေးက လက် ၄ လုံးလောက် ပေါ်နေပြီ။ ကျွန်တော် တကယ်ဆို အောက်က ဓားသွားယူပြီး အဲ့ကောင်ကို သတ်ပစ်မလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် တမျိုးကြီးဖြစ်ပြီး ဆက်ကြည့်နေမိတယ်။
ကျွန်တော့် မိန်းမကို သူများတွေ ပါးစပ်နဲ့ပြောရင်တောင် မခံနိုင်ရာကနေ အခုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်တောင် မသိဘူး။ ရေသန့်ပို့ တဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်ညှစ်နေပုံက တကယ့်ကို ဇောထန်နေပုံကြီး။ သူကိုယ်တိုင်လဲ ခြေတွေ လက်တွေ တုန်နေတာကို ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။ မိန်းမလေးကို နောက်ကနေ နို့ကိုင်ထားပြီး မိန်းမဖင်ကို ညှောင့်နေသေးတယ်။
ဖူးဝေရဲ့ ခါးသားဖြူဖြူမွတ်မွတ်လေးတွေကလည်း အင်္ကျီနဲ့ထဘီ စကပ်ကြားကနေ လက်တစ်ဝါးလောက်ကို ပေါ်နေပြီ။ မိန်းမကလဲ တကယ်ကို ရုန်း နေရှာတာ။ သူ့လက်လေးနှစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ချုပ်ထားတာတောင် တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ပြီး ရုန်းထွက်နေသေးတယ်။ ဟိုကောင်ကလဲ မိန်းမလည်ကုတ်လေးကို ရိုက်တာ ”ဖြန်း” ကနဲ ”ဖြန်း” ကနဲပဲ။ ကျွန်တော်ကဘေးစောင်းကနေကြည့်နေတာဆိုတော့မိန်းမမျက်နှာ လေးကိုမြင်နေရတယ်။တအားငိုနေတာ။ ဆောင့်ဆောင့်လည်းရုန်းသေးတယ်။
အဲ့ဒီရေသန့်ပို့တဲ့ အသားမည်းမည်းကောင်က ဖူးဝေ လေးရဲ့ အင်္ကျီနှိပ်သီးတွေကို ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဟိုကောင်က မိန်းမအင်္ကျီ နှိပ်သီးတွေကို ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်တာ တစ်ချက်တည်း။ ”ဖြုတ်” ကနဲ ရင်ဖုံးအင်္ကျီ ရင်ဘတ်က ပွင့်သွားတော့ မိန်းမက အတင်းဆွဲဖုံးထားသေးတယ်။ ခါးသေးသေးလေးအောက်က မိန်းမဖင်ကြီးတွေကလည်း ကော့တင်းနေတာများ ကျွန်တော်တောင် တံတွေးအကြိမ်ကြိမ် မျိုချရတယ်။
ဟိုကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ နားနားကပ်ပြီး တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ အံကြိတ်ပြီး ပြောနေသေးတယ်။ မိန်းမကလဲ ငိုပြီး ရုန်းနေတယ်။ ခဏကြာတော့ ဟိုကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ အင်္ကျီကို ဆောင့်ဆွဲပြီး ဖြဲပစ်တာ ”ဗြိ” ကနဲ ”ဗြစ်” ကနဲပဲ။ ရိုက်လည်း ရိုက်သေးတယ်။
နောက်တော့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေး မရုန်းတော့ပါ ဘူး။ တအင့်အင့်နဲ့ မွေ့ယာပေါ် မျက်နှာအပ်ပြီး ငိုနေတယ်။ ဟိုကောင်က မိန်းမအင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့…. လှလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးလေးရဲ့ ရင်သားတွေ ဘော်လီအသားရောင် ဖျော့ဖျော့လေးထဲကနေ အလုံးလိုက် ရုန်းကန်ထွက်နေတယ်။ မိန်းမက ခါတိုင်းလို ဘရာစီယာမဝတ်ပဲ ချိတ် ၅ ခုတပ် ဘော်လီအသားရောင်လေး ဝတ်ထားတယ်။ အဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမ နို့တွေကို ကိုင်နေလိုက်ပုံများ တကယ့် မုဒိမ်းကောင် ပီသတယ်။ ကိုင်ပြီးတော့ ညှစ်ထားလိုက်တာ လွှတ်ကိုမလွှတ်တော့ဘူး။
မိန်းမရဲ့ မျက်နှာလေးကို သူ့လျှာကြီးနဲ့ ယက်ရင်း တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ ဘာတွေ ပြောနေပြန်တယ် မသိဘူး။ သူပြောလိုက်ရင် မိန်းမက ရုန်းပြန်ရော။ မိန်းမက ရုန်းရင် သူက ရိုက်ပြန်ရော။ ခဏကြာတော့ မိန်းမရဲ့ ထဘီစကတ်ကို ချွတ်နေတယ်။ မိန်းမလဲ မရုန်းရဲတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ တိုးတိုးလေးပဲ ငိုရင်း ငြိမ်ခံနေတယ်။
မိန်းမရဲ့ ထဘီစကတ်တွေက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တွေလေ။ လွယ်လွယ်ချွတ်လို့ မရတော့ ဟိုကောင်က မိန်းမကို ကုတင်ပေါ် ဖိချကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကနေ မိန်းမရဲ့ ထဘီကို လှန်တယ်။ ထဘီစကတ်လှန်ပြီး မိန်းမဖင်ကြီး ပေါ်လာတော့ ရိုက်တော့တာပဲ။ တဖြန်းဖြန်းနဲ့။ ပြီးတော့ မိန်းမကို တစ်ခုခုပြောပြီး ရယ်လိုက်သေးတယ်။
ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ ဖင်တုံးကြီးနှစ်တုံးက ခါးသွယ်သွယ်လေး အောက်ကနေ လုံးတင်း ကော့ထောင်နေတာဆိုတော့ ဟိုကောင်လည်း ခဏခဏ တံတွေးမျိုချနေတယ်။ မိန်းမက ကုတင်စောင်းမှာ မှောက်ရက်လေး ငိုနေတဲ့အချိန် ဟိုကောင်က သူ့စွပ်ကျယ်နဲ့ ပုဆိုးတွေကို ချွတ်နေတယ်။ သူ့လီးကလည်း အစွမ်းကုန် တောင်နေပြီ။ ကျွန်တော့်လီးထက် နည်းနည်းကြီးတယ်။ သူ့လီးကြီးက မည်းနေလိုက်တာမှ ခရမ်းပြာရောင်တောင် ပေါက်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လီးကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ မိန်းမမျက်နှာကို ဆွဲလှည့်ပြီး ကြည့်ခိုင်းပါရော။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးကလည်း လုံးဝမကြည့်ဘူး။
အဲ့ကောင်က မိန်းမလက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့လီးထည့်ပေးတော့ မိန်းမက ရုန်းပြန်ရော။ အဲ့မှာတင် ဟိုကောင်လည်း အသံတွေ ကျယ်လာတယ်။
”ငါလိုးမက ငါ့လီးကိုင်ဆို မကိုင်ဘူး”
ဆိုပြီး မိန်းမကို ဆွဲရမ်းပြီး ရိုက်တော့တာပဲ။ မိန်းမရဲ့ ငိုသံလေးကလည်း ပိုကျယ်လာတယ်။ အဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ ပင်တီကို အောက်ဆွဲချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့်လီးကလည်း အစွမ်းကုန် တောင်နေပြီ။ ဘာတွေလုပ်နေတာကို အနီးကပ် မမြင်ရပေမယ့် ရှေ့ကိုလှုပ်ခါသွားတဲ့ မိန်းမရဲ့ နို့အုံနှစ်အုံကို ကြည့်ပြီး လီးထည့်လိုက်ပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေး မရုန်းနိုင်တော့ပါဘူး။
အဲဒီကောင်က မိန်းမရဲ့ အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်ပြီး တင်းအိနေတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ နို့အုံနုနုတွေကို ဘော်လီပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်ရင်း လိုးနေပါတယ်။ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုရင်း ဖူးဝေလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး တသိမ့်သိမ့် တုန်ခါနေတော့တယ်။ အဲ့ကောင်ကတော့ နောက်ကနေ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်နေပြီ။
အဲ့ကောင်က မိန်းမရဲ့ ဘော်လီချိတ်တွေကို တစ်ချိတ်ချင်း ဖြုတ်ပစ်တယ်။ ချိတ်တစ်ခု ပြုတ်သွားတိုင်း ဆူဖြိုးတင်းယင်းတဲ့ ဖူးဝေလေးရဲ့ ရင်သားနှစ်လုံးက တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လွင်လာတယ်။ မိန်းမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ချုပ်ထားဆဲမို့ နို့အုံသား တင်းတင်းလေးတွေက ဘော်လီထဲက လျှံထွက်နေတာ လှလိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးကတော့ တအင့်အင့်နဲ့ ဟိုကောင် လိုးဆောင့်သမျှ ခံနေရရှာပြီလေ။ ကျွန်တော်ရဲ့လီးကလည်း အစွမ်းကုန် တောင်မတ်နေတာပေါ့။
အဲ့ကောင်ကတော့ မိန်းမရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ သူ့လီးထည့်ပြီး အားရပါးရ လိုးတော့တာပဲ။ လိုးတာမှ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ဆံပင်တွေကို ဆွဲပြီး လိုးတာ။ တဖောင်းဖောင်းနဲ့ကို မြည်နေတယ်။ လိုးရင်းနဲ့ မိန်းမရဲ့ ဘော်လီကိုလည်း ဆောင့်ဆွဲဖြုတ်ထည့်လိုက်တော့ ဘော်လီကြိုးတွေရော ချိတ်တွေရော တစ်ခါတည်း ပြုတ်ထွက်သွားပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ နို့နှစ်လုံးက ပြူးကနဲ တုန်ကနဲ ပေါ်လာတော့တာပဲ။
ဟိုကောင်ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုကိုင်ပြီး နောက်ကနေ ဆောင့်တာ။ ဘာမှတောင် မကြာသေးဘူး။ ၂ မိနစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။
”ငါလိုးမ… လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ… အား အာ”
ဆိုပြီး အသံနက်ကြီးနဲ့အော်ရင်း ဒူးကြီးကွေးပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ တဇတ်ဇတ်နဲ့ ပြီးနေတယ်။ ဒီကောင်ပြီးသွားလို့ ထွက်လာရင် မျက်ခွက်ကို ဖြတ်ရိုက်ရအောင် နံရံပေါ်က မီးသတ်ဆေးဘူးကို အဆင်သင့် ဖြုတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ငနဲက မထွက်လာသေးဘူး။ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ဖက်ထားပြီး ပါးကိုင် နို့ကိုင် လုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးဆို အသေငိုရော။
ကျွန်တော့်မိန်းမ ငိုတော့ ဟိုကောင်က
ဆိုပြီး ရိုက်ပြန်ရော။ အခုထိကို အဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ ကျောပေါ်မှာ မျက်နှာအပ်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်ဆော့ပြီး ဖီးခံနေတုန်းပဲ။ ခဏကြာတော့ သူ့လီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်။
”ဟဲဟဲ အရည်တွေ အများကြီးပဲ”
ဆိုပြီး မိန်းမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ဆော့နေသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒီကောင် ဘာလုပ်မလဲ ဆက်ကြည့်နေတာ။ စောက်ချီးပေကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမ ဘေးမှာ ဝင်အိပ်ပြီး မိန်းမကို ပါးကိုင်နားကိုင်နဲ့ တဟီးဟီးရယ်ပြီး စကားပြောနေသေးတယ်။ ခဏကြာတော့ မိန်းမကို ပက်လက်ဆွဲလှန်ပြန်ရော။ မိန်းမကလည်း ရုန်းပြန်တာပေါ့။
ဒီကောင်က မိန်းမကို ပါးတစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် ရိုက်ပြီး လက်ညှိုးထိုးပြီး ခြိမ်းခြောက်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမပါးစပ်လေးကို လက်နဲ့ ညှစ်ထားပြီး အသေနမ်းတော့တာပဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးခင်မျာ ရုန်းလို့လဲ မရတော့ နှုတ်ခမ်းစုပ်ခံနေရ တယ်။ မျက်နှာလေးကိုလည်း အတင်းလှည့်ရှာတယ်။ တစ်မိနစ်လောက် နမ်းပြီးတော့ ဒီကောင်က ဘာလုပ်သလဲဆိုရင် မိန်းမကို တက်ခွပြီး ပါးစပ်ထဲ သူ့လီးထည့်ပါလေရော။
မိန်းမဆို ငိုတာ အကျယ်ကြီးပဲ။ ရုန်းလဲ အသေရုန်း။ ဒါပေမယ့် မရဘူး။ ဟိုကောင်က မိန်းမဆံပင်တွေ ကို ဆွဲထားပြီးတော့ ပါးစပ်ထဲ လိုးထည့်နေတာ။ ပါးစပ်ထဲ လိုးထည့်တာလည်း သိပ်မကြာဘူး။ နောက် ၂ မိနစ်လောက်နေတော့ တဇတ်ဇတ်နဲ့ ကော့သွားပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပြန်ရော။ ပြီးသွားတော့ ဒီကောင်က ငိုနေတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမပေါ်ကို ပေါင်တစ်ချောင်းတင်ပြီး ဖက်ထားပြန်ရော။
”ပေါက်စီက တင်းနေတာပဲ” တို့ ”ကိုယ်လိုးပေးတာ ကောင်းလား အချစ်လေး” တို့ ”စောက်ဖုတ်လေးက ကြပ်တယ်နော်” တို့ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေ ပြောပြီး မိန်းမရဲ့ မျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နေတယ်။ ကျွန် တော့်မိန်းမကတော့ ဘာမှပြန်မပြောဘူး။ ငိုပဲငိုနေတယ်။ ခဏကြာတော့
”လာချစ်လေး… နောက်တစ်ချီ လုပ်ရအောင်”
ဆိုပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမကို မတ်တပ်ဆွဲထပြီး မှန်တင်ခုံရှေ့ ခေါ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမနို့တွေကို ကိုင်ညှစ်ပြီး မှန်ထဲကို လက်ညှိုးထိုးပြရင်း တိုးတိုး တိုးတိုးပြောပြီး တဟားဟားနဲ့ သဘောကျနေပြန်တယ်။ မိန်းမရဲ့ လည်ကုတ်ဝင်းဝင်းလေးကိုလည်း စုပ်နမ်းသေးတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ လည်တိုင်လေးက ဖြူနုနေတာပဲ။ ကျွန်တော် ဝယ်ပေးထားတဲ့ ပလက်တီနမ် ဆွဲကြိုးလေးကလည်း တလက်လက်နဲ့။
ဟိုကောင်က မိန်းမနို့ကိုကိုင်ရင်း မိန်းမကျောလေးကို နည်းနည်းဖိချပြီး အောက်က သူ့လီးကို အပေါက်တည့်အောင် ပြန်လုပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမခါးလေးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဖက်ထားပြီး နောက်လက်တစ်ဖက်က မိန်းမနို့အုံတစ်အုံကို ကိုင်ရင်း လိုးပြန်ရော။ ဒီတစ်ခါက ပိုကြမ်းတယ်။ ဒီကောင် နှာစကားတွေ ပြောတာလဲ အကျယ်ကြီးပဲ။ မိန်းမပါးလေးကိုလည်း နမ်းသေးတယ်။
ကျွန်တော့်မိန်းမလေးဆို ကလေးလေးတစ်ယောက် ငိုသလိုကို ငိုတာ။ ဒီတစ်ခါကျတော့ လိုးရင်း တန်းလန်းကနေ သူ့လီးကို ရုတ်တရက် ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး မိန်းမကို မှန်တင်ခုံပေါ် လက်ထောက်ကုန်းရက်သား ဖြစ်သွားအောင် ထပ်ဖိချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အပေါက်မတည့်သလိုနဲ့ အောက်ငုံ့ကြည့်ပြီး ထည့်နေတယ်။ အကြာကြီးပဲ။ ၄ မိနစ်လောက် ကြာမှ ဒီကောင် ဖိသွင်းလိုက်တော့ မိန်းမက
”အန်းး… ဟင့်… ဟင့်… ဟင့်”
ဆိုပြီး ခေါင်းခါပြီး ရုန်းပါလေရော။ ဒီကောင်က ကျွန်တော့်မိန်းမ ဖင်ကို ပါကင်ဖွင့်လိုက်တာကိုး။ အသွင်းအထုတ်တော့ သိပ်မလုပ်ဘူး။ မိန်းမနို့တွေကို ကိုင်ထားရင်း ဒီတိုင်းကြီးပဲ ရပ်နေတယ်။ ဖူးဝေလေးရဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို ရိုက်တာလဲ တဖြန်းဖြန်းနဲ့ပဲ။
ကျွန်တော်လည်း ဆက်မကြည့်ချင်တော့တာနဲ့ အောက်ဆင်း ကားယူပြီး လမ်းထဲက ကြေးအိုးဆိုင်ထဲမှာ ဝင်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ ဟိုကောင့်ကို ထွက်လာတော့မယ် ထင်ထားတာ။ မထွက်လာဘူး။
နောက်ထပ် ၁ နာရီ ကျော်ကျော်လောက် ကြာမှ ဟိုကောင် ထွက်လာတယ်။ ချွေးတွေလဲ ရွှဲလို့။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး။ နောက်က လိုက်သွားကြည့်တော့ ဒီကောင်က သုံးဘီးကို ရေသန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ရှေ့မှာ ရပ်တယ်။ အထဲဝင်သွားပြီး ခဏကြာတော့ 125 ဆိုင်ကယ် တစ်စီးနဲ့ ပြန်ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော် လိုက်သွားကြည့်တော့ ဒီကောင်က အိမ်ငှားနေတယ်ထင်တယ်။ နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ် တစ်လုံးထဲကို ဝင်သွားတယ်။
ကျွန်တော်လည်း နေရာသိတော့ အိမ်ကိုပဲ ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် အိမ်ရောက်တော့ မသိသလို ဟန်ဆောင်ရင်း
လို့ ခေါ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးရဲ့ မျက်နှာက ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့် အင်္ကျီကို သွားချိတ်ပေးပြီး ပြန်လာတော့
”ကို… ဖူးဝေ… ဖူးဝေ ကလေးမယူချင်သေးဘူး”
ဆိုပြီး ပြောရင်း အသံလေး သိမ်ဝင်သွားပြီး ငိုပါလေရော။ ကျွန်တော်လည်း
”အင်းပါ… ဖူးဝေ သဘောအတိုင်းပါ”
ဆိုပြီး သူ့ကို ထွေးပွေ့ထားပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီညမှာ သူ့ကို ကျွန်တော် မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဘောလုံးပွဲပဲ ကြည့်နေလိုက်တယ်။
နောက်ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်က အိမ်ရှေ့ကနေ နေ့ခင်းပိုင်း ဖြတ်ဖြတ်မောင်းကြည့်တယ်။ ၃ ရက်လောက်ကြာတော့ ဟိုကောင် ထပ်ရောက်လာပြန်ရော။ ဒီတစ်ခါတော့ မီးဖိုချောင်ထဲကနေ ကွဲသံတွေ ကြားနေရတော့ အသာလေးဝင်ပြီး ချောင်းကြည့်တယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေးက ဟိုကောင့်ကို ဖန်ခွက်တွေနဲ့ ပေါက်နေတာ။
ဟိုကောင်ကလည်း တစ်ခါစားဖူးပြီဆိုတော့ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ တိုးလာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ဝင်လုံးပါလေရော။ ဟိုကောင်က ဟိုကိုင်သည်ညှစ်နဲ့ လုပ်နေပေမယ့် မိန်းမက အသေရုန်းတာ။ ဒီနေ့ မိန်းမဝတ်ထားတာက အသားပျော့ပျော့ ခရမ်းရောင် ဂါဝန်လေး။
မိန်းမက ဖြူဖြူချောချော တောင့်တောင့်လေးဆိုတော့ ဟိုကောင်က အသေထန်နေတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဂါဝန်ကို ဆွဲဖြဲပစ်နေတယ်။ မိန်းမ စောက်ဖုတ်လေးကိုလည်း လက်နဲ့နှိုက်နေတာ ပြွတ်ကနဲ ပလပ်ကနဲ အသံတွေ တအားထွက်နေတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမရဲ့ ဘရာစီယာအနီရောင်လေးကို ဆွဲဖြုတ်လွှင့်ပစ်ပြီး လိုးပါလေရော။
လိုးတာမှ ဒီတစ်ခါ ဒီကောင် ပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်ထင်တယ်။ အကြာကြီးပဲ။ ၁၅ မိနစ်လောက် ရှိမယ်။ တဖန်းဖန်းနဲ့ လိုးနေတာ။ ပြီးတော့ မိန်းမကို ပြောသေးတယ်။
တဲ့။ ပြီးတော့ မိန်းမလက်ကိုယူပြီး ဂွင်းထုခိုင်းတယ်။ မိန်းမကလည်း အရိုက်ခံရမှာကြောက်လို့ ထုပေးရှာပါတယ်။ ဟိုကောင်က ပေါင်ကြီးဖြဲကားပြီး မိန်းမက သူ့ပေါင်ကြားမှာ ထိုင်ရင်း ဖင်တုံးလုံးနဲ့ ဂွင်းထုပေးနေရတာ။ ပြီးရင် သူ့မယားလို သဘောထားပြီး တုံးလုံးချွတ်ပြီး အားရအောင် လိုးနေပြန်ရော။
နောက်နေ့တွေဆို ဒီကောင် နေ့တိုင်းကို လာလိုးတော့တာ။ တစ်ခါလာလိုးရင် ၂ နာရီလောက် ဇိမ်ပြေနပြေ လိုးနေတာ။ တခါတခါဆို ဖူးဝေကို တုံးလုံးချွတ်ကြီး ထိုင်ခိုင်းထားပြီး တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ နို့စို့တာ။ စို့ပြီး လိုးပြန်ရော။ လိုးနေတာမှ ဇိမ်ပြေနပြေကို ဖူးဝေရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးပေါ် တက်ခွဖက်တွယ်ပြီး အကြာကြီးလိုးတာ။ မိန်းမရဲ့ကိုယ်ထဲ သူ့လရည်တွေ ထည့်တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပဲ။ လိုးပြီးတော့ မိန်းမကို အကျယ်ကြီး ပြောသေးတယ်။
”ဟဲ.. ဟဲ.. ငါ့မိန်းမလေး ကလေးမွေးမှ ငါနဲ့တူလား ကြည့်ရဦးမယ်တဲ့..”
ဖူးဝေကတော့ တရှုပ်ရှုပ်ပဲ ငိုနေတော့တာ။ အဲ့လိုနဲ့ ၅ ခါမြောက် သူလာလိုးပြီးတဲ့နေ့မှာ သူ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ အိမ်ပြန်တဲ့အချိန် ကျွန်တော် နောက်ကနေ လိုက်သွားတယ်။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ဒေါသတအား ထွက်လာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တောင် သတိမထားမိသေးခင်မှာ ကျွန်တော် သူ့ကို တိုက်ချလိုက်ပြီ။ ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တော့ အနားက လူလုံးဝမရှိဘူး။ သူကတော့ ခြေထောက်ညှိုသကျည်း ကျိုးသွားတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ သူ့နားထင်ကို ခဲနဲ့ ၁၀ ချက်လောက် ဆက်တိုက်ထုလိုက်တော့ မလှုပ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ သူ့ကို မသေမရှင်ကြီး ဖြစ်မနေစေချင်သလို ခံစားချက်မျိုး ဝင်လာလို့ နဖူးကိုပါ ၄ ချက် ၅ ချက်လောက် ရိုက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ငါဘာလုပ်မိပါလိမ့်ဆိုပြီး အသေကြောက်လာရော။ ကားကို ဘော်ဒီရုံ တန်းမောင်းပြီး ချက်ချင်းပြင်လိုက်တယ်။
၂ ပါတ်လောက် ၁ လလောက်အထိ အသေကြောက်နေပေမယ့် ဘာရဲမှ လာမဖမ်းဘူး။ အခုထိပဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းမလည်း နောက်ရက်ပိုင်းမှာ တငိုင်ငိုင် တတွေတွေ ဖြစ်မနေတော့ပဲ ပြန်ပြုံးလာတယ်။
အခုဆို ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကလေးယူဖို့ စဉ်းစားနေပြီ။ ကျွန်တော် လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်မိန်းမတောင် မသိဘူး။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အမြဲအသစ်လိုဖြစ်ပြီး မေ့မရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါပဲ။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 35,452
← ကျေးဇူးပါ မောင်ရယ်
ယွန်းချစ်တဲ့ ဖေဖေ →